5 inonakidza kwazvo misika yemasheya epasi kuisa mari mu | Ehupfumi Zvemari
Parizvino, indekisi yakasarudzika yemabhizimusi eSpanish, Ibex 35, yatove pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu. Neimwe nzira zvinoita sekudaro yakafukidza zvinangwa zvayo kwenguva pfupi. Asi zvisiri zvechokwadi ndezvekuti kusahadzika kuri kurwisa vadiki nepakati varimi. Kunyanya sezvo ivo vasingazive zvekuita kubva ikozvino zvichienda mberi. Kunyangwe kubvisa zvigaro zvavo mumusika wemasheya kana kana zvichipesana kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinobatsirikana dzine chinangwa munzvimbo dzino chaidzo. Nechinangwa chekutanga chekuita mashandiro emari kuita purofiti inevimbiso huru yekubudirira inogoneka.
Mukati meichi chirevo chizere, kune akati wandei emisika mumisika yepasi rose inogona kubatsira zvikuru kuvhura zvinzvimbo mune izvi zvemari midziyo. Vanogona kunge vari ruzivo rwehuwandu hwevashandisi, asi unogona kunge uri mukana chaiwo wekunatsiridza marimendi ekupindirana ekushanda kunoitwa pamusika wemasheya. Kunze kwemamwe akateedzana ezvehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Seimwe yesarudzo iwe haufanire kusiya bhegi panguva ino.
Kune rimwe divi, iri chiitiko kusati kwati kuneta kusati kwakwira kweakajairika marekisheni emasheya indices yeemaquity equities. Mupfungwa iyi, neziso pane rinotevera Misangano yeFed uye chii chingaitika neBrexit inotyisa. Izvi zvinhu izvo pasina mubvunzo zvichave nemhedzisiro, mune imwe pfungwa kana imwe, pane chero mhando yemisika yemari, kunyangwe idzo dziri kure kwazvo kubva kunharaunda yedu iripedyo. Kwete zvisina maturo, hazvigone kukanganwika kuti hupfumi huri kuwedzera kuwanda uye zvimwechetezvo zviri kuitikawo nemisika yemasheya, chero nzvimbo inosarudzwa kudyara mari inowanikwa, pasi peimwe kana imwe nzira mune mashandiro emusika wemasheya.
2 Tevera maitiro muIndia
3 Scandinavia misika
4 Russia nesimba remafuta
5 Mumadhoni eAsia
Iyo ndeimwe yeakanakisa-ari kuita ari kubuda emisika yemari gore rino. Nekuongorora zvekare pamusoro pevhareji yepasi rese. Iyo BOVESPA, ndiyo inodanwa kunzi indekisi yemasheya emuBrazil, iri pasi pekutenga kumanikidza muchikamu chikuru chemakambani akanyorwa mumusika weIbero -America uyu. Kusvika padanho rekuti mari zhinji uye mamaneja ekudyara akazviisa pachikamu ichi chenyika uye vanosanganisira zvikamu zvavo zviri chikamu chemazana avo ekudyara.
Matanho anotsigira sununguko yezvehupfumi vane zvakawanda zvekuita nezvezvinoitika kuitika muBrazil equities. Iko kuchine nzira yekumusoro, kunyanya kana ichiperekedzwa nekuvandudzika kwakanaka kwemisika yepasi rose, kunyanya United States indices. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yemisika yemari kwaunofanirwa kuiswa kwenguva pfupi nepakati. Kunyangwe mashandiro ayo achireva makomisheni akati wandei kupfuura mumisika yeEurope.
Tevera maitiro muIndia
Iyo ndeimwe yemabhegi ayo anochengetedza zvirinani zvehunyanzvi chimiro panguva ino uye izvo zvinogona kupfuuridzirwa mumwedzi inotevera. Izvo hazvisi zvechimwe chinhu kuti ndeimwe yemisika yekutengesa iyo yanga iri pasi pe zvakajeka bullish muitiro. Iko kune dambudziko hombe rauinaro ikozvino nderekuti pane shanduko mune zvinoitika, kuenda kubva mukukwiridzira kuenda kuchikwata. Kana pane zvinopesana, kuti pane zvakakosha kugadziriswa mukugadziriswa kwemitengo yezvikamu zvinotengeswa muchikamu chino chenyika kusvika ikozvino kubva kunzvimbo dzechinyakare.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti maIndia equities ndeimwe yeakanyanya kukurudzirwa nevanoongorora mumisika yemari. Kuverengerwa mune yekudyara portfolio neadiki nepakati varimi. Zvirinani semubatsiri kune hombe kudyara. Kunyangwe pane zvinopesana, iri imwe yesarudzo iyo inogadzira njodzi dzakawanda mukushanda kwayo. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti makambani akanyorwa akanyanya kuzivikanwa kune veSpain vanoita mari. Pamusoro pekuve zvakanyanya kuomarara pakuongorora kwakakodzera.
Mukati meEuropean equities iyi ndiyo imwe inogona kuita zvirinani kubva zvino zvichienda mberi. Nekuda kweiyo kusimba kwehupfumi hwavo yenyika uye izvo zvinogona kukonzeresa kuti ma indices emasheya akwire mumwedzi iri kuuya. Zvese izvi pasina kusiya kondinendi panguva yekuita mashandiro, nemakomisheni emakwikwi zvakanyanya achienzaniswa nedzimwe nzvimbo dzenzvimbo. Iyo imwe yeimwe sarudzo dzinofanirwa kutariswa muchikamu chechipiri chegore. Pasina kuburitswa panjodzi dzinopihwa nedzimwe misika yepasi rose yekuenzana. Nechekuita kwezviito zvinozivikanwa kune vazhinji vadiki nepakati varimi.
Kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kana kuti uyu musika wezvemari mukana wakanaka wekuita mari inochengetedzwa inowanikwa mu nguva refu yekugara nekuda kwekudzikama kukuru kwemisika yemakero kuchamhembe kweEurope. Izvo zvinofanirwawo kutariswa kuti kusagadzikana kwayo kuri nani nemusiyano pakati payo yakanyanya uye shoma nguva iyo isiri yekurova semamwe matunhu eEuropean. Nemitengo inoenderana neyeyedu nyika dzakavakidzana. Mune izvo zvinoumbwa senzira itsva yekutora zvinzvimbo mumusika wemasheya pasina kuenda kunzvimbo dziri kure kwazvo.
Russia nesimba remafuta
Kana mutengo wemafuta asina kuchena uchizoramba uri pamwero wakakwira kwazvo, iyo sarudzo yekudyara mumusika wemasheya haisi imwe kunze kweiyo Russian equities. Sezvo yaizove nekwaniso yekuwongorora yepamusoro-soro misika yemari yepasirese. Hazvishamisi kuti kune makambani mazhinji ane hunhu hwakanyorwa uye hwakaumbwa seimwe yeiyo zvimwe zvine simba zvinopihwa izvo zvinogona kuwanikwa izvozvi. Pamusoro pemamwe matekiniki emisika. Neichi chikonzero, musika weRussia unotakura njodzi yakawanda mukuita kwawo uye nekudaro hauzove nesarudzo kunze kwekungwarira kana uchigadzira mafambiro.
Ichowo mumwe wemisika irikubuda iyo yagadzira tarisiro pakati pevamiriri vemari vakasiyana mumakore apfuura. Kunyangwe magumo asina kuzadzikisa tariro idzi kuti anga achigadzira pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Nekuti shanduko yaro yanga isina kunaka sezvingatarisirwa kubva pakutanga. Kufambisa kudiki kunogona kuitwa kubva zvino zvichienda mberi, uye nguva dzose kuisa odha yekumira kurasikirwa kuti uzvidzivirire kubva kuzviitiko zvisingadiwe mumisika yemari. Kuva sarudzo inoda kuongororwa kwakanyanya nevatengesi.
Zvimwe zvekushamisika izvo misika yemari isingakwanise kubata kubva zvino zvichienda kuburikidza nekuchinjana kwakakosha. Iko kunoshamisa kwazvo kuti misika yepasi rose yakavhara kota yekupedzisira pamwe nekukosha kwakanyanya mushure mekuvimba kwavo kwehupfumi kwave kuwanikwa zvirinani pane zvakafanotaurwa nevaongorori misika yemari. Neine tarisiro yakati wandei padivi revashambadziri vadiki nepakati kutarisana nekudyara kwavo mumusika wemasheya sepakutanga uye panguva imwechete yakakosha sezvairi chaizvo. Kusvika padanho rekuti iro rinogona kukubatsira kufambisa mafambiro ako mumusika wemasheya kubva ikozvino zvichienda mberi.
Chimwe chezvinhu chinogona kutsigira iyi yakasarudzika sarudzo, hapana mubvunzo kuti panguva ino inogona kunge iri iyo kutengeserana pakati peUS neChina izvo zvakazopedzisira zvagadzira kusimbiswa kwemisika yemari. Uye neiyi pfungwa, misika yemasheya pasina mubvunzo ndeimwe yeakanyanya kubatsirwa nekufamba uku pakati pemaviri emasimba makuru epasirese. Kunze kweimwe nhevedzano yekufunga ine hukama hukuru nemisika yemuno. Iko, dambudziko hombe ratinozove naro kubva zvino zvichienda kunonzi kurwara kwekukwirira mushure mekuvandudzwa kwemisika yekutengesa mukota yekutanga yegore. Kusanganisira, zveshuwa, izvo zvakawanikwa zvakare munzvimbo ino yenzvimbo yepasirese.
Kupfuura chokwadi chekuti kubva panguva dzino dzimwe kugadzirisa kwakanaka mumitengo yezvikamu zvekuchengetedzeka zvinotengeswa pamusika wekutengesa mumisika iyi kumabvazuva. Nekuti zvirokwazvo mikana yebhizinesi inozobuda yausingakwanise kupotsa chero zvodii. Kunyangwe makomisheni avo vari kuwanda kupfuura mumisika yemastock. Asi kutora sechirevo nharaunda locomotive, senge Germany, iyo mumwedzi yapfuura iri kuratidza inopfuura chiratidzo chimwe chekushaya simba kwehupfumi. Izvi zvinogona kuve zvekunyepedzera kuenda kune dzimwe nzvimbo dzinochengetedza kugona kwavo kuzere kugona. Uye nemaonero ekuti izvo zvavanogona kuita zvirinani pane zvinoitika kumabhegi ekumadokero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 5 inonakidza kwazvo misika yemasheya ekudyara mairi